အခွံအေးဂျင့် နှင့်ပတ်သက်ပြီးသိထားရမယ့်အရာများ Taiwan မှ အခွံအေးဂျင့် ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊
CHERNG LONG ENTERPRISE CO., LTD. ၏ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူဖြစ်ပါသည် အခွံအေးဂျင့်စက်ရုံ, အလုပ်ရုံ, တွင်တည်ရှိသည် Taiwan။ ဒါဟာသူကြွယ်အတွေ့အကြုံ, စိတ်အားထက်သန်သောယုံကြည်ခြင်းနှင့်လူငယ်များ၏အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နှင့်အတူအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ကောင်လေးကတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ R & D, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွေ့အကြုံအနှစ်နှင့်အတူကျနော်တို့စျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်နှင့်သစ္စာနှင့်ပြည့်စုံန်ဆောင်မှုနှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့်မား fine-ထုတ်ကုန်တိုးတက်ထုတ်လုပ်ရန်နှင့်ရောင်းဖို့ထက်သာလွန်ကိရိယာများ, အဆင့်မြင့်နည်းပညာနှင့်ကျွမ်းကျင်အဖွဲ့ရှိသည်။ ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဖောက်သည်တွေနဲ့နီးနီးကပ်ကပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့။ သူတို့ရဲ့ရဲ့သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီသူတို့ရဲ့စျေးကွက်ကိုဖွံ့ဖြိုးရန်သူတို့ကိုကူညီပေးသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက် "နှစ်ခုစလုံးနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပေါ်အနိုင်ရမှ" ဖြစ်ပါတယ်။
ပုံစံ - CL-801
ဤအေးဂျင့်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အေးခဲနေသောအေးဂျင့်နှင့်သန့်စင်သောအေးဂျင့်များအသုံးပြုခြင်းကိုလုံးဝရှောင်ရှားနိုင်သည်(ယေဘုယျအားဖြင့်,အလင်း၏သန့်စင်-အလေးချိန် T/ကို C အထည်လျော့နည်းဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်ကိုအသုံးပြုသည်).
ဤအေးဂျင့်သည်အထွေထွေ degreaser မဟုတ်ပါ.၎င်း၏ emulsifying ပါဝင်ပစ္စည်းများကြောင့်ဖြစ်သည်,ဒါကြောင့်ကြောင့်ပိုးမွှားမှဆလင်ဒါနံရံကိုစွန်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ.ပိုးမွှားသန့်စင်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုသည်ကောင်းမွန်ပြီးအထည်၏ဆိုးဆေးများကိုမထိခိုက်ပါ.
၃.ဤသည်အေးဂျင့်ယေဘုယျ N ကိုအပေါ်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ desizing အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်,ဂ/L,ဂ/W နှင့် T/ကို C လွင်ပြင်ယက်အထည်,ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေရန်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်အသုံးပြုမှုကိုလျှော့ချနိုင်သည်.
ယေဘုယျသောက်သုံးသော 2g ဖြစ်ပါတယ်/ဌအရည်အချိုးအစား
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.textileauxiliaries.com.tw/my/scouring-agent.html
အကောင်းဆုံး အခွံအေးဂျင့် ကိုရှာဖွေပြီးစျေးဝယ်ရန်အတွက် အခွံအေးဂျင့် ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားဖြန့်ဖြူးသူ၊ Taiwan